Namibia neSeychelles dzinoenda pamwechete sekuredza uye kushanya
Location: musha » Kutumira » Newsletter » Namibia neSeychelles dzinoenda pamwechete sekuredza uye kushanya
Namibia inotarisa kudyidzana kwenyika mbiri neSeychelles mumaindasitiri ehove nekushanya, akadaro Commissioner achangobvumidzwa.
Commissioner weNamibian kuSeychelles, Veiccoh Nghiwete, akapa gwaro rake rekubvumidzwa kuMutungamiri weSychelles, James Michel neChipiri.
Nghiwete akaudza vatori venhau kuti Namibia neSeychelles dzinofanirwa kugovana ruzivo muindasitiri yekushanya.
"Takabva kure, nekudaro, tinofanira kuramba tichigovana ruzivo, kushanda pamwe chete, nekubatsirana maererano nekubatsira kwenyika mbiri dzedu," akadaro Nghiwete.
Mukuru weKomishinari mutsva akati kuchengetedza zviwanikwa zvemumvura zvemunyika mbiri uye kuchengetedza chirongwa chakasimba chezviwanikwa izvi zvakakosha zvikuru.
Sekureva kwaNghiwete, imwe mukana wekudyidzana kwenyika mbiri pakati peNamibia neSeychelles, chitsuwa chiri kumadokero kweIndian Ocean, iri mukudyidzana kwehupfumi.
“Nyika dzedu dzese dziri mbiri dzine runyararo uye kugadzikana. Chasara ndechekusimbisa kudyidzana kwedu kwehupfumi, ”akadaro Nghiwete.
Kutevera mhemberero yake yekubvumidzwa, Nghiwete akaridzira runhare kuna Seychelles Mutevedzeri weMutungamiri Danny Faure, uko kwakaenderera mberi nhaurirano dzekusimbisa kubatana kwenyika mbiri.
Nyika mbiri idzi dzinotarisirwa kusaina Memorandum of Understanding (MOU) yemubatanidzwa wenyika mbiri munguva pfupi iri kutevera.
Iye achangogadzwa High Commissioner achagara muPretoria muSouth Africa.
Mutyairi wako akachengeteka zvakadii?
Seychelles mutungamiri Michel anosiya chigaro
Kwete-GMO Soya Musika Saizi, Govera, Remangwana Mugwagwa-mepu...